Fanamboarana fotodrafitrasa :: Mbola maro ireo lalana tapaka eto an-drenivohitra • AoRaha
Fanamboarana fotodrafitrasa Mbola maro ireo lalana tapaka eto an-drenivohitra
Mitohy ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Ny eny Ankazomanga mivoaka hatrany Imerinafovoany; ny eny Ambatomainty-Anjanahary sy Isotry-67 ha ary eny Anosibe. Raha ny eny Ankazomanga manokana dia ny 50%-n’ny asa amin’ izao fotoana izao no efa vita. Amin’ny 17 jona any ho any mihitsy vao azo hifamoivoizana iny arabe iny.
«Nanomboka ny 24 mey lasa teo ny asa. Mirefy 10 km eo ny halavan’ny lalana havaozina. Ny fanadiovana, ny fanamboarana ny sisin-dalana ary ny fanarenana ireo lakan-drano no tena mampaharitra ny asa. Any amin’ny volana novambra any mihitsy vao ho vita tanteraka ny asa rehetra», hoy ny fanazavana azo. Ny faharetan’ ny fitohanan’ny fifamoivoizana amin’ireo faritra samihafa eto an-drenivohitra sy ny manodidina no tena mampikaikaika ny mpampiasa lalana.
Etsy ankilany, efa vita kosa ny fandrakofana tara ny arabe eny Ambatomainty-Anjanahary saingy mbola tsy vita ny faritra natokana ho an’ny mpandeha an-tongotra. Ny 95%-n’ny asa no tontosa ankehitriny. Mbola tsy afaka mandeha amin’io lalana io anefa ny fiara fa ny mpandeha antongotra ihany. Raha tsiahivina dia tokony ho tamin’ny 26 mey lasa teo no miverina amin’ny laoniny ny fifamoivoizana. Tombanana amin’ny herinandro ambony mihitsy vao hisokatra tanteraka indray ity lalana ity.
Voatery mivily indray ireo fiara mandalo eny Ambodin’Isotry noho ny fanamboarana lakan-drano eny an-toerana. Amin’ny faran’ny herinandro no voa-lazan’ireo tompon’andraikitra fa hahavitan’ny asa.
Fanasoketana tamin’ny praopagandy :: Tratra ireo nametaka sary tamin’ny fiaran’ny zandary
Fiarovana tontolo iainana :: Orinasa tsy miankina hamadika ny fako ho angovo